Phone ပြောနေတာကို အမှတ်တရ ပြန်နားထောင်ဖို့အသံဖမ်းထားချင်ရင် ~ mgkhainghtoo
00:47 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဒီနည်းလေးကတော့ ဖုန်းအပြန်လှန်ပြောတဲ့ခါ အမှတ်တရ ပြန်နားထောင်ဖို့ အတွက်
အသံဖမ်းထားတဲ့နည်းပါ ဒီဆော့ဝဲ ထည့်ထားရင် သီးသန့် ဘာမှလုပ်ပေးဖို့ မလို့ ပါဘူး
ဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ၀င်လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အော်တို အသံဖမ်းထားပေးပါလိမ့်မယ်
ပြီးရင် သိမ်းမှာလား ၊ ဖျက်မှာလား ဖေ့ဘွတ်တင်မလား မေးက ပို့ မလား မျိုးစုံအောင်
လုပ်လို့ ရပါတယ် နောက်နားက ဟိန်ဝေးယံ အဖေနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်းသိန်းတို့အသံဖိုင်က
ဒီလိုဖမ်းထားတာပါ ဖုန်းပြောရင် သတိထားဖို့ လိုတယ် ။တဖက်က အသံဖမ်းထားရင်
ပြောသမျှ မှတ်တမ်းတင်နေတာမလို ချစ်သူရည်းစားတွေကတော့ အလွမ်းပြေလေး
ပြန်လည်း နားထောင်လို့ ရပါတယ် ။ တချို့ ဖုန်းတွေကတော့ ဖမ်းဖို့ ပါလာပီးသားပါ
ဒါကဆော့ဝဲသီးသန့် ဆိုတော့ အော်တိုဖမ်ပြီး သိမ်းပေးပါတယ် ။ လိုအပ်ရင်ဆွဲလိုက်
မရရင် မေးကနေ တောင်းပါ zwmnna@gmail.com ....................................။
ဒီမှာ Download ယူ- Phone talking auto recorder for Andorid phone
This application hasabasic purpose to record all your call (incoming and outgoing). Please be noticed that due to limitation of Android phone (hardware and software), this program only can record from microphone. Please turn on the loudspeaker during conversation to get clear voice from the other side. All conversations are recorded under file “RecordMyCall” file in memory card.
-All files are saved in memory card.